Fomba fanao tsara indrindra iraisam-pirenena SEO
Manatsara ny atiny iraisam-pirenena
Alatsinainy Janoary 24, 2011 Zoma, Martsa 1, 2013 Douglas Karr
Mety tsy hatahotra ianao na iraisam-pirenena ny mpihaino anao amin'izao fotoana izao, saingy mety zavatra mety ho tianao jerena akaiky izany. Ny fisondrotan'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny Internet dia mitombo ary mety ho loharano mahafinaritra ho an'ny orinasanao hanitarana ny orinasany. Telo amin'ireo mpanjifanay no mivarotra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary niasa izahay mba hamantarana ireo fomba fanao tsara indrindra amin'ny motera fikarohana. Ity misy fikarohana vitsivitsy:
gShiftLabs dia fitaovana iray hanaraha-maso ny SEO ao an-toerana sy any ivelany.
Amin'ny toe-javatra mety, raha milahatra tsara amin'ny firenena manokana ianao dia tokony hanana ccTLD taratra isaky ny firenena (.co.uk, .fr, .de, sns.) Izay raisina ao amin'ny firenena nahaterahana. Raha tsy safidy izany dia ampiasao ny subdomain isaky ny fiteny, toy ny se.domain.com, de.domain.com sns.
Mametraha kaonty fitaovana Webmaster marobe isaky ny ccTLD na subdomain.
Aza hadino ny manondro ny fiteny ao amin'ilay faritra.
Manintona rohy avy amin'io firenena manokana io.
Torohevitra Google momba ny fampiantranoana ao amin'ny firenena. Mety hanampy ny DNS vahiny raha tsy afaka mampiantrano iraisam-pirenena ianao.
Raha manana birao vahiny ianao dia aza hadino ny manasongadina an'io birao io amin'ny tranokala azo ampiharina.
Aza miantehitra amin'ny fandikan-teny mandeha ho azy. Raha tena maniry hahatratra mpihaino iraisam-pirenena ianao dia manakarama feo iraisam-pirenena handikana ny atiny.
Tags: Content Marketingiraisam-pirenenafikarohana iraisam-pirenenaseo iraisam-pirenenafikarohana Optimization
Ampidiro ny Radio WordPress sy Blog Talk Blog
Bob Prosen dia mandefa mpanafaingana orinasa kely